သေချာကြည့်မှ သဘောပေါက်မယ့် တလွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ ဆယ်ဖီ ဓာတ်ပုံများ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingသေချာကြည့်မှ သဘောပေါက်မယ့် တလွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ ဆယ်ဖီ ဓာတ်ပုံများ
သေချာကြည့်မှ သဘောပေါက်မယ့် တလွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ ဆယ်ဖီ ဓာတ်ပုံများ
April 28, 2020 Bo Bo Amazing 0
ဒီတခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ ငိုအားထက် ရယ်အားသန်စေခဲ့တဲ့ ဆယ်ဖီ ဓာတ်ပုံများအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေခေတ် ပရိသတ်ကြီးရော တစ်ရက်ကို ဘယ်နပုံလောက် စမတ်ဖုန်းနဲ့ ဆယ်ဖီ ရိုက်ဖြစ်ပါသလဲ … shwekhitonlinetv.com
ဒါပေမယ့် ဆယ်ဖီရိုက်ရင် သေချာဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို တစ်ပုံချင်းစီ ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်နော် ။
၁။ ကွက်တိဖြစ်နေတဲ့ နောက်ခံအနေအထား။
Selfie ဆွဲရင် နောက်ခံ Background အနေအထားကိုအရင်ကြည့်သင့်တယ်ဆိုတာကို ဒီပုံကသက်သေပြနေသလိုပါပဲ။ နောက်ခံတံခါးက သော့ နဲ့ ဒီချာတိတ်ရဲ့ ပါးစပ်အနေအထားနဲ့ ကွက်တိကျသွားတော့ ပုံဆိုးပန်းဆိုးထွက်လာပါရော။ shwekhitonlinetv.com
၂။ Group Selfie မှာ သူလည်းပါချင်ရှာမှာပေါ့ ။
ဒီပုံမှာတော့ လူတစ်စုက Group Selfie ဆွဲနေတဲ့အချိန် သစ်ပင်ပေါ်က Slot လေးတစ်ကောင်က မကြောက်မလန့်ပဲ ကင်မရာကို ကြည့်နေတာကြောင့် သူပါ ဒီ Group Selfie ထဲမှာ ပါဝင်ချင်နေတာလားလို့ ထင်ချင်စရာပါပဲ။ သူ့ကြောင့် လူပုံတွေကိုတော့ ကွယ်သွားတာပေါ့နော်။ shwekhitonlinetv.com
၃။ ချစ်သူရှိတယ်လို့ ဟန်ဆောင်သူ။
ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို ချစ်သူက ခိုးရိုက်တဲ့ပုံလို့ ပြောပြီး တင်ထားတဲ့ ပုံပါ။ ဒီကောင်မလေးက သူ့ကိုယ်သူ ချစ်သူရှိတယ်လို့ ဟန်ဆောင်နေတာ ဟုတ်မဟုတ်ကို မှန်ထဲကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်နော်။ shwekhitonlinetv.com
၄။ ဟေး… တို့ လှလားဟင် ? အင်း … မဆိုးပါဘူး။
ဒီပုံမှာတော့ မျက်မှန်ဆိုင်တစ်ခုမှာ မိန်းကလေးတစ်ဦးက မျက်မှန်တပ်ပြီး ပို့စ်ပေးကာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဓာတ်ပုံထဲက မျက်မှန်ဆိုင်ရှင်ရဲ့ အကြည့်ကတော့ ဒီဓာတ်ပုံကို တမျိုး ဖြစ်သွားစေပါတယ်နော်။ shwekhitonlinetv.com
၅။ အိုက်တင်ကောင်းလွန်းသူ ။
ဒီပုံကတော့ မသိရင်ရေချိုးခန်းထဲမှာ ချစ်သူနှစ်ဦးကြည်နူးနေတယ်လို့ထင်ချင်စရာပါ။ ကောင်မလေးက သူ့ကိုဓာတ်ပုံအတင်း ခိုးရိုက်နေတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးကို မရိုက်ဖို့ ရှက်ကိုးရှက်ကန်း နဲ့ တားနေတဲ့ ပုံပါ။ ဒါပေမယ့် အဖြစ်မှန်က မှန်ထဲမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ အတော်လေးကို သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး ပါပဲနော်။ shwekhitonlinetv.com
၆။ ဖခင်ကို ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ ကလေး။
နာမည်ကျော် အမျိုးသမီးအဆိုတော် Kesha နဲ့အသွင်တူအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ ဖခင်ကို ကားနောက်ခန်းကကြည့်နေတဲ့ သမီးလေးရဲ့ အကြည့်က ဆယ်ဖီ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပါလာပါတယ်။ ဒီကလေးငယ်က ဖခင်ကို ကြောက်ရွံ့နေတာလား ? အော်ဂလီဆန်နေတာလား ? မသဲကွဲလို့ ပရိသတ်ကြီးရဲ ထင်မြင်ချက်လေးကိုပြောပြသွားပေးပါဦးနော် … shwekhitonlinetv.com
၇။ ဟာ ဘယ်လိုလူပါလိမ့် ။
ဒီပုံကိုတွေ့တွေ့ချင်း ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ ဒီလူအတွက်စိုးရိမ်သွားကြမလား မသိဘူးနော်။ နောက်မှာရထားလာနေတာကို သိလို့အမြန်ပြေးရင်တောင် သူ့ကားကတော့ ကျိန်းသေဆုံးရှုံးရတော့ မယ့်ပုံပါပဲ။ သံလမ်းပြောင်းပြီး သွားမယ့်ရထားဖြစ်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးရမှာပါ။ shwekhitonlinetv.com
၈။ လူကိုပဲကြည့် ကျန်တာမကြည့်ပါနဲ့ ။
မိန်းမလှတစ်ဦးရဲ့ Mirror Selfie ကတော့ တွေ့မြင်ရသူတွေကို စိတ်ရှုပ်စေမှာ အမှန်ပါပဲ။ အခန်းထဲမှာ ရှုပ်ပွနေတာကို သိသိသာသာ ဖော်ပြနေတဲ့ အတိုင်းပါပဲနော်။ shwekhitonlinetv.com
၉။ မျက်နှာအစား မြင်းကို အသားပေးခဲ့တဲ့ Selfie ။
ဒီပုံကတော့ အတော်လေးကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးရဲ့ လက်ရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကြည့်ပါဦး ကင်မရာရဲ့ Focus က လူရဲ့မျက်နှာမှာ ရှိမနေဘဲ မြင်းဇောင်းထဲက မြင်းဆီရောက်နေတယ်လေ။ shwekhitonlinetv.com
၁၀။ ဆယ်ဖီ ဆွဲဖို့က အဓိက။
ဒီပုံကို ကြည့်ရတာ လေယာဉ်ပျံပေါ်မှာ မီးဘေးအန္တရာယ်နဲ့ ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ အခြားခရီးသွားတွေကတော့ အထိတ်တလန့်နဲ့ ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်နေပေမယ့် အမျိုးသားတစ်ဦးကတော့ အေးဆေးပဲ Selfie ဆွဲနေပါတယ်။ သြော် အရေးပေါ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာ Selfie သည်သာ အဓိက ပါလားနော်။ shwekhitonlinetv.com
ရွှေခေတ်ပရိသတ်တွေအတွက် အခုဖော်ပြပေးတဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေက အပျော်သဘောနဲ့ အပြုသဘောဆောင်ကာ ရေးသားဖော်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာလေးဖတ်ပြီး တစ်နေ့တာ အမောပန်းတွေ ဖြေဖျောက်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ shwekhitonlinetv.com
ရွှေခေတ် ပရိသတ်တွေရော ဆယ်ဖီဆွဲရင်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အလွဲတွေရှိရင် ဖော်ပြပေးခဲ့ပါဦးနော် …။
နာမည်ကျော် မျက်လှည့်ပြကွက် (၅) ခုရဲ့ နောက်ကွယ်က လျို့ဝှက်ချက်များ
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် ဝတ်ခဲ့တဲ့ အဝတ်အစားတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က လျို့ဝှက်ချက်များ
အလိုက်ကန်းဆိုး မသိတဲ့ လူတချို့ရဲ့ စိတ်ပျက်စရာ အပြုအမူများ